Dowlada Jabuuti oo qorsheynaysa in Eritrea ay ka dacweysa Maxkamada Caalamiga ah ee ICJ
News Report • November 16, 2018
Muranka dhulka ah ee u dhexeeya dalalka Jabuuti iyo Eritrea ayaa isu bedelaya in la isla aado Maxkamada caalamiga ah ee ICJ kadib markii dowlada Jabuuti ay ka codsatay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey inay ka taageeraan sidii loo xallin lahaa muran xuduudeedka kala dhaxeeya dalka Eritrea iyo inay dacwo ka furtaan maxkamadda cadliga ee International Court of Justice.
Dowladda Jabuuti ayaa cadeysay mowqifkeeda la xiriira hadal dhawaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyay magaalada Asmara kaddib booqasho saddex cisho qaadatay oo uu halkaa ku tagay.
Dowlada Jabuuti oo walaac xooggan ka muujisay hadalkii Madaxweyne Farmaajo ka sheegay Asmara (Akhriso)
Dowladda Jabuuti ayaa si kulul uga hadashay hadal dhawaan madaxweyne Farmaajo ka jeediyey magaalada Asmara ee dalka Eriteria kaasoo ahaa in Asmara laga qaado cunna-qabateynta hubka ee ay saartay Qaramada Midoobay.
Madaxweyne Farmaajo oo Jabuuti kaga qeyb galay shirka Madasha Iskaashiga Afrika iyo Shiinaha
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada Jabuuti, halkaasoo uu kaga qeyb galayo Shirka Madasha iskaashiga Afrika iyo Shiinaha.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo booqday Xarunta Baarlamaanka Jabuuti
Guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa maanta booqday Xarunta Baarlamaanka Jabuuti iyo dekeda weyn ee Magaalada Jabuuti. Kormeerka guddoomiyaha waxa ku wehlinaayay guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xsan Cali Khyre iyo wafti balaaran oo uu hogaaminayo ayaa caawa gaaray magaaladda Jabuuti ee D-Jabuuti, waxaana goroonka diyaaradaha ee dalkaas ku soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaaaraha Jabuuti iyo qaar ka mid mas’uuliyiinta dalka.
Madaxweyne Farmaajo oo lugtii u dambeysay ee socdaalkiisa dalalka deriska ku tagay Jabuuti
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta gaaray dalka Jabuuti, waana safarkii u dambeeyay ee socdaalka uu ku marayo dalalka deriska ah ee Ciidamada ka jooga Soomaaliya.